CERCHIO DRUIDICO ITALANO (ALItali DRUIDIC CIRCLE)
1970: Luigi "Ossian" D'Ambrosio mụrụ na Nordhorn, Germany.
1980: D'Ambrosio kwagara Biella, ,tali, ya na ezinụlọ ya.
1994: E guzobere Branco dell'Antica Quercia (Ochie Oak Pack) ma webụsaịtị ewepụtara.
1996: Otu a mere ememme Beltane mbụ ya na Zumaglia Castle (Biella, Italy).
1998: Branco dell'Antica Quercia ghọrọ Antica Quercia (Oak Ochie).
2001: D'Ambrosio lụrụ ma nata nnabata mbụ ya.
2002-2003: Ebe ememme a kwagara Magnano (Biella, Italy) wee banye na Mottalciata (Biella, Italy).
2003: Antica Quercia sonyeere Circolo dei Trivi (otu Wiccan nke edobere na Milan) maka nhazi nke Mgbakọ Mba nke abụọ na Wicca nke were aha "Council of Druids and Witches.”Mmekọrịta dị n’etiti Antica Quercia na Circolo dei Trivi ghọrọ otu n’ime oge ga-adịgide adịgide na mbara ala optali.
2005: Ememme ahụ mere na Arcobaleno Park dị na Masserano (Biella, Italy).
2008 (May): Cerchio Druidico Italiano (Dtali Druidic Circle) guzobere n'oge Ememe Beltane na Masserano.
2008 (June): N'ime oge ezumike nke afọ, D'Ambrosio kere ụkpụrụ maka Cerchio Druidico.
2008 (October): Philip Carr Gomm, onye isi oche nke Order of Bards, Ovates and Druids, duziri nzukọ ọmụmụ ihe na nke mbụ na timetali.
2009: A kpọrọ D'Ambrosio ka ọ mee ememme Summer Solstice na Stonehenge.
2015: Antica Quercia, Circolo dei Trivi na ọtụtụ mkpakọrịta ndị ọgọ mmụọ kere Unione delle Comunità Neopagane (UCN Italia - Union of Neopagan Communities).
2016: A na-eme Ememme Beltane iri abụọ na Masserano (Biella, Italy).
2018 (May): Caroline Wise, onye isi oche nke Mmekọrịta Isis, bịara Ememme Beltane iji mee ememme ncheta nke iri nke Cerchio Druidico.
Cerchio Druidico Italiano bụ njem ime mmụọ dabere na mmụọ ime mmụọ oge ochie nke ndị Celts, achọpụtara ọzọ na nke mbụ ya na narị afọ nke iri na asatọ na British Isles. Mgbanwe ahụ gbanwere ma gbanwee maka ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze na mmegharị ndị ọzọ, dị ka anwansi. Cerchio Druidico gbasaa na Europe dum wee bịarute duringtali n'oge 1990s, na-etinye aka na ntinye mmụọ ọzọ. Nke ahụ bụ, a na-amụ ụfọdụ mkpakọrịta dị ka ihe dị egwu ma na-emesịa ihu mmụọ, ebe ndị ọzọ mụrụ dị ka mmụọ n'ụzọ doro anya mana mgbe ahụ na-eche ihu na akụkọ ihe mere eme iji chọpụta oge ochie Celtic gara aga. Ihe omumu ihe mere eme mere ka mmekorita ndi otu a chee ihu na oge ndi ozo meghariri uzo abuo: n'otu aka, enwere ndi na-akpo onwe ha ndi nwughari; n'aka nke ozo, onwere ndi kwenyere na itinyeghachi omenala.
Lakọwapụta usoro oge nke ndị otu istali bụ ọrụ dị mgbagwoju anya ebe ọ bụ na ọtụtụ nwere ndụ ndị na-anaghị agafe afọ iri abụọ, ha na-agbanwe aha ha ọtụtụ oge na / ma ọ bụ na-agbanwe ndị isi. Oge izizi enwere ike ide ederede laghachi na 1996 site na ọmụmụ nke Ememme Beltane na Biella, nke ndị Cultural Association Antica Quercia (nke izizi guzobere na 1992) na Celtica (ahaziri na Aosta Valley nke Mor Arth Association) Nakwa na 1996, e guzobere ulturaltù Na-ahụ Maka Ọdịbendị Terra Insubre na Varese, ebe ọ na-emekọ ihe mere eme na nchọpụta ihe ochie na ndị Alpine, Celtic na Germanic. N'adịghị ka otu ndị ọzọ na-azọrọ na ha bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke a nwere ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị doro anya karị. Na 1998, emere Ememme Trigallia International Celtic nke mbụ; o mere mgbe ahụ kwa afọ abụọ rue 2005, mgbe emume ikpeazụ ya mere. Ihe nnọchi anya a bụ Trigallia Celtic Cultural Association, guzobere ọzọ na 1998 na-esote ememme ahụ.
Ọ bụ afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị ka ndị otu mmụọ bidoro ịpụta n'ihu ọha. Nke mbu, ndi mmeghari agbanwe nke ime mmuo nke ndi Insubria, bidoro na 2003, mana ọ diri naanị afọ ole na ole. Na 2008, Cerchio Druidico Italiano ka emepụtara n'oge ememme Beltane nke afọ ahụ. E nwere ìgwè abụọ ọzọ dị mkpa mana na-agafe agafe, Italian Bardica na Druidic Academy (OLNO, Oltre la Nona Onda) na Grand Druidic Lodge nke Italy (GralDrui). N'Itali, e nwekwara ngalaba mba nke OBOD nke na-enye usoro ịntanetị.
Onye guzobere na onye ndu nke Cerchio Druidico Italiano bụ Luigi "Ossian" D'Ambrosio. [Foto dị n'aka nri] Ossian mụrụ na Nordhorn, Germany na 1970. N'oge ọ bụ nwata, ezinụlọ ya kwagara Biella, Italy, ebe ọ gara n'ihu ibi. Ọ bụ onye omenkà jeweler na onye nta akụkọ na esotericism. Ọ bụkwa onye egwu. Na 1988, o guzobere Opera IX, otu igwe ojii nke dị n'etiti ndị kachasị ogologo na Itali. Njikọ a na egwu dị ya ezigbo mkpa, n'ihi na ọ bụ site n'ụdị egwu a ka ọ bịarutere ikpere arụsị maka oge mbụ n'oge uto ya, n'ihi abụ nke ndị otu mba ọzọ.
E nweela ọtụtụ ụzọ ime mmụọ ya. O buru ụzọ biakwute ụdị mbụ nke ịhazi okpukpe Italiantali, njikọ ndị metụtara amoosu nke oge a. Ọ nwere mmasị na nhazi na omume ha, mana ọ mataghị onwe ya na ọnọdụ ime mmụọ ahụ. N'ihi ya, ọ malitere nyocha banyere nkà mmụta okpukpe ma hụ Emanuele Pauletti, onye ghọrọ onye nkụzi ya. Pauletti jikọtara ọdịnala Breton Druidic ma duru Ossian ka ọ chọọ njikọ ndị ọzọ kpọmkwem na mpaghara ugwu Italy. Mgbe ahụ, ọ mụtara shamanism na Michael Harner Shamanic Studies Foundation wee chọpụta Celtic shamanism. N'oge nyocha ya, ọ hiwere mkpakọrịta mbụ ya na 1994, Branco nke Antica Quercia (Oak Oak Pack), nke mechara bụrụ Anticaquercia Njikọ, nke o si wee hazie Ememme Beltane mbụ na 1998. Ebumnuche bụ isi nke Association bụ nyocha na ntinye profaịlụ.
Ememme Beltane bụ otu n'ime ememme tictali nke Celtic kachasị ogologo oge; ọ guzobere na Arcobaleno Park dị na Masserano, Biella. N'oge ememme Beltane nke 2008, Cerchio Druidico Italiano (Italian Druidic Circle) hiwere. Dị ka Ossian si kọọ n'akwụkwọ ya, La via delle chọrọ (2013), ọmụmụ nke Cerchio Druidico nyere ohere nkewa nke ọdịmma n'etiti mkpakọrịta abụọ ahụ dị iche iche, na-ahapụ ha ka ha nwekwuo ike ilekwasị anya na atụmatụ ụfọdụ: Antica Quercia Association (Antica Quercia Association webụsaịtị nd) na-emekọrịta akụkụ kachasị nka na ọdịbendị. , mgbe Cerchio na-etinye onwe ya n'okporo ụzọ ime mmụọ, na-ekwe ka ịmepụta ohere ọzọ neo-druidic n'ime ìgwè ahụ.
N'ọnwa Ọktọba nke otu afọ ahụ, D'Ambrosio na Davide "Cronos" Marré kpọrọ Philip Carr Gomm (The Order of Bards, Ovates and president Druids) Philip Carr Gomm (onye isi oche Circolo dei Trivi (onye Italian mbụ Wiccan gbara ndụ, na Milan) Nzukọ ọmụmụ ihe ahụ bụ otu n'ime ihe omume dị mkpa maka Cerchio Druidico Italiano n'ihi na ọ bụụrụ oge agụmakwụkwọ maka ndị otu niile.
Na 2009, D'Ambrosio ghọrọ onye mbụ Italian Druid kpọrọ oku ka a na-eme ememme Summer Solstice na Stonehenge, nke Order of Bards, Ovates and Druids (OBOD) na-eme.
Neo-druidism bu otu mmeghari na udi nke Neopaganism; mmeghari na udiri a na-eketa oru ngo nke imeghari ma obu iwughari odinala nke ndi otu ndi otu okwukwe nke ndi Kristian (Harvey 2016). E nwere ụzọ abụọ dị iche iche na ụzọ ochie iji bie neo-druidism n'Italytali: ụfọdụ na-akọwa ọnọdụ ime mmụọ dị ka ụdị ndụ nwere ike ịdabere na okpukpe ọ bụla ebe ndị ọzọ na-ebi ya dị ka okpukperechi. Cerchio Druidico Italiano na-agbaso ụzọ nke abụọ a ma bụrụ naanị otu dị na mgbago ugwu Italy nke na-enye ụzọ ime mmụọ doro anya.
Ndị otu a na-etinye usoro ịghachite ọdịnala. Onye ndu ha maara nkewa dị n'etiti ọdịnala ochie nke ọbịbịa nke Iso Christianityzọ Kraịst kpatara. Ọ chọghị iweghachi ọnọdụ ime mmụọ nke Celtic mbụ, n'ihi nsogbu nke nrụzigharị akụkọ ihe mere eme ziri ezi (D'Ambrosio 2013). Kama nke ahụ, Cerchio Druidico na-enye ụzọ ime mmụọ nke oge a iji mepụta njikọ miri emi n'etiti ụmụ mmadụ na okike. Ha na-eche njikọ na ala ahụ, ụdị nlọghachi nke akụkọ ihe mere eme na ọdịiche nke ókèala ebe ndị mmadụ bi. Ebumnuche bụ ịmepụta obodo neopagan nke dabere na nkwado na ibu ọrụ onwe onye. Ebumnuche a bụ ebe obibi obibi ma kwekọọ na mmegharị neopagan dị ka okpukpe ndị sitere n'okike (Harvey 2016).
N'ezie, Cerchio Druidico Italiano na-etinye okpukperechi na etiti nke ime mmụọ na omume ya. E nyefere ikike nke obibi obibi na nghọta nke onye ọ bụla, mana ihe otu ahụ na-atụ aro bụ ihe omume na-adịgide adịgide iji mee ka mmekọrịta dị mma n'etiti mmadụ na ihe ndị ọzọ dị ndụ. Ebumnuche bụ iweghachi ụmụ mmadụ n'ọnọdụ ha okike iji kwe ka ịdị n'otu dị n'udo. Ebumnuche usoro iwu nke neopaganism gosipụtara site na nhọrọ nke ebe Cerchio Druidico Italiano nwere nzukọ ya. Ndị otu a họọrọ Ogige Arcobaleno, ogige nkeonwe na mpaghara echedoro nke na-agbake na gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ ebe a gbahapụrụ agbahapụ.
A na-egosiputa njikọ a na okike na nnọchite nke chi. Neopaganism kekọrịta ihe neodruidism na-etinye bi-theism na etiti nke nkwenkwe ya; Chineke na chi nwanyị ahụ na-anọchite anya akụkụ abụọ nke eluigwe na ala. Nke a na-enye ha ohere ịkọwa na chi ọbụla mmadụ chetụrụla kemgbe ọtụtụ narị afọ abụghị naanị ngosipụta nke otu akụkụ nke ihe abụọ a.
Cerchio Druidico Italiano na-akọrọ Neopaganism nke kachasị nke afọ, kalenda kwa afọ na-eme ememme asatọ nke oge a na-eme kwa afọ. a na-akọwa nke kachasị ọhụrụ dị ka ememme ọkụ. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị Okpukpe Ọchịchị ọ bụla, na aha ndị ọdịnala dị iche iche eweghachiri (Hutton 2008). Naanị ememme Samhain na Beltane bụ ọha; ndị ọzọ niile bụ ndị nzuzo maka ndị òtù Cerchio Druidico.
Ememme Anyanwụ bụ emume agro-pastoral. Cerchio Druidico na-eji aha ndị Bard Iolo Morgangaw chọrọ karịa utu aha ndị ọzọ (Yule, Ostara, Litha na Imbolc):
The Spring Equinox, Alban Eiler (Earth's Light), dara n'etiti Machị 21 na 22.
Oge oyi, Alban Arthuan (ọkụ Arthur), dabara n’etiti Disemba 20 na 23.
The Summer Solstice, Alban Hefin (Ìhè nke Ifufe), dara n'etiti June 20 na 23.
Mgbụsị akwụkwọ Mgbụsị akwụkwọ, Alban Elfed (Light's Light), dabara n'agbata Septemba 20 na 21.
Ememme ọkụ bụ:
Samonios, nke a na-eme n’etiti Ọktoba na Nọvemba, bụ ụbọchị Afọ Ọhụrụ nke Celt.
Brigantia / Imbolc, nke emere na ụbọchị mbụ nke ọnwa Febụwarị.
Beltane, emere eme n’ubọchi mbu nke Mee.
Lugnasa, emere n’abalị mbụ nke Ọgọstụ.
Maka emume ndị a, ndị otu Cerchio Druidico Italiano na-ezukọ na oghere dị n'okike, na-abụkarị ogige Arcobaleno. Ha na-ezukọ na gburugburu wee soro emume na edemede nke otu ahụ mepụtara. Emume ndị a niile nwere otu isi ihe owuwu: okirikiri na-emepe; enwere ekele na ịkpọ oku maka isi okwu anọ na chi dị iche iche; a na-eme mmegharị ahụ kpọmkwem nke ezumike ahụ; okirikiri wee mechie, na-ewepu ikike ndị akpọburu. Ememme ọ bụla na-enweta ihe ọdịnala ọdịnala sitere na ọdịnala dị iche iche. Akụkụ dị mkpa nke ememme ahụ bụ nri na-eso nke otu ahụ kesara. N'ụzọ dị otu a, akụkụ dị nsọ na nke adịghị nsọ jikọtara ọnụ, na -emebi oke n'etiti ha abụọ ma nye ohere ịmepụta oghere nkwenye n'etiti ndị otu.
Na mgbakwunye na ememme ndị a jikọrọ ya na Wheel of the Year, enwere ọtụtụ oge ememme ndị ọzọ, ọkachasị na usoro ndụ otu. Nnabata nnabata na nnabata ohuru a na-eme n’obodo na-eme mgbe nne na nna gụrụ nwa ahụ aha ha n’ihu ndị otu niile. Oge omume ndị ọzọ na-esochi omume ndị kachasị mkpa na ndụ nwatakịrị (dịka ịhapụ eze mbụ ma ọ bụ ụbọchị mbụ n'ụlọ akwụkwọ) Emume nke abụọ na nke atọ bụ Njikọ Dị Nsọ na Nkewa. Sacred Union bụ alụmdi na nwunye ebe di na nwunye na-egosi onwe ha dịka ezinụlọ; Nkewa bụ emume na-akọwagharị mmekọrịta anyị na ndị otu niile ma ọ bụrụ na nke mbụ adaghị. A na-enye alụmdi na nwunye dị nsọ ma n'ime afọ na n'oge mmemme nke Beltane ma ọ bụghị naanị Ossian na-eme ya mana site n'aka onye ọ bụla nke Cerchio Druidico nke rụzuru nnabata. N'ikpeazụ, enwere Transition Rite, olili ozu ma ọ bụ ihe ncheta iji sọpụrụ ndị okenye. A na-arara oge emume ndị ọzọ nye nnabata nke ndị otu. Ememe ndị a bụ usoro mbụ na nke ikpeazụ nke otu ụzọ ime mmụọ.
Cerchio Druidico mere ememe afọ iri mbụ nke ndụ ya na Mee 2018, na afọ iri a ọtụtụ ndị sonyere na otu ahụ na a ghaghị ịmepụta "grove" nọọrọ onwe ha: Triplice Cinta Druidica. [Foto dị n'aka nri]
Ọdịdị nke Cerchio Drudico Italiano dị iche: Ossian bụ etiti ya na injin ya, mana otu a na-agọnahụ ụdị ike pyramidal ọ bụla na-akwado nzukọ okirikiri. Ọnọdụ otu ahụ bụ na achọrọ onye ndu iji dozie omume nke ndị otu dị iche iche bụ ndị, dị ka iberibe gia, ga-elekọta ọrụ ha ọ bụla (D'Ambrosio 2013).
Thezọ ime mmụọ na Cerchio Druidico nwere usoro atọ: bard, ovate na druid. N'oge agba agba, neophytes ga-arụ ọrụ na ihe okike ha na mmetụta uche ha. Neophytes ghọrọ Bards mgbe ọ gara Cerchio Druidico maka otu afọ na ụbọchị. N'oge ahụ, ha bụ ndị “raara onwe ha nye.” The Ovate bụ dọkịta na onye na-agba afa. Achọpụtala Ovates ugbu a na shaman n'ihi na ọ bụ ha nwere ike ịga n'etiti ụwa abụọ. Ọzọkwa, mgbe otu afọ na otu ụbọchị gachara onye ahụ na Cerchio Druidico.
Bards bu nchekwa nke ncheta akuko banyere ndi mmadu. Ha bụ ndị na-ese ihe na-echekwa ma na-ebufe ọdịnala site na ọrụ ha. Ha bụ ndị na-eme ka echiche bụrụ ihe a na-ahụ anya, si otú a na-egosipụta uche nke ịdị nsọ. Ihe nnọchianya jikọtara ọnụ ọgụgụ a dịgasị iche iche. A na-ekenye ụrọ acha anụnụ anụnụ, mmiri mmiri na West ọdịda; oge bụ oge opupu ihe ubi na osisi bụ birch ("beith"), ihe nnọchianya abụọ nke mmalite (D'ambrosio 2013).
Ihe na-akpali Bard bụ Awen, otu n'ime ihe ndị bụ isi nke Druidism nke oge a. Ọ bụ aha na akara nke Iolo Morgangw na-ekenye n'ike mmụọ nsọ, nke na-enyere Chi nwanyị aka ikwu okwu site na Bard. N’ọtụtụ emume bardic nwere oge mgbe a na-etinye abụ maka ịrịọ Awen nke ga-agbadata na Bards na-esonye iji gbaa ha ume maka arụmọrụ (Harvey 1997). Cerchio Druidico na nke a abụghị otu; n'ememe niile enwere oge na mbido oge a na-akpọ Awen ukwe iji kpalite ma jikọọ chi na ndị sonyere.
Ovates bu ndi dibia na ndi ogwu. Ha bụ ndị na-aga njem n'etiti ụwa, na-enwe ike ikwu ihe karịrị mmadụ. N'ihi ikike a, ha nwekwara ike ịrụ ọrụ nke ndị ọhụụ na ịkọwa ozi sitere na chi. Njikọ a na Chineke na-enye ohere njikọ miri emi na okike ka Ovate nke oge a na-elekọta. Agba nke metụtara Ovate bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, oge a na-acha n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, abalị bụ oge ya, na osisi Ogham metụtara ya bụ yew (Harvey 1997; D'ambrosio 2013).
A na-arụ ọrụ Druid nke oge a na okike na na mgbake nke emume ndị edobere n'ọhịa na-enye aka ịmegharị njikọ na gburugburu ebe obibi. Ejikọtara ya na druid bụ agba ọcha, osisi oghamic nke akpu na mistletoe, ebe ọwụwa anyanwụ, ebe anyanwụ na-awa, na oge ọkọchị.
Cerchio Druidico echewo ihu na mpụga na mpụga. N'ime, otu ahụ anwaala imepụta netwọkụ na ndị otu Italian druidic. Otú ọ dị, mgbalị ahụ enwebeghị ihe ịga nke ọma ebe ọ bụ na ìgwè dị iche iche enwebeghị ike ịnakwere ụkpụrụ nduzi ime mmụọ
Na mpụga, Cerchio Druidico dị na mpụga ọdịbendị Katọlik dị na Italy ma n'ihi ya enwere ike ịbụ onye a kpọrọ "òtù nzuzo" (Wallis 1976). Ọ bụ ezie na ndị otu a esonyere nke ọma na ọha ndị Italy, mgbe ụfọdụ ha na-ezochi ndị otu iji zere aha ọjọọ. Otu a na-achọ igbochi njirimara na-adịghị mma site na isonye na “Akụkụ 8 Nkeji edemede.” Ihe oru ngo a bu Unione delle Comunità Neopagane (UCN), mmekorita nke ndi otu, ndi otu na ndi n’ekpere (Unione delle Comunità Neopagane website nd). Ebumnuche nke UCN bụ nnabata okpukpe gọọmentị neopagan site n'aka gọọmentị Italy ma ọ bụ, n'ụzọ ọzọ, nnabata ndị otu neopagan dị iche iche. Nghọta gọọmentị ga-abụ nzọụkwụ dị mkpa na nnabata ọha na eze.
Foto # 1: Luigi "Ossian" D'Ambrosio.
Image # 2: Achịkọta emume Cherchio Druidico.
Image # 3: Akara Cherchio Druidico.
AnticaQuercia. nd Weebụsaịtị Antica Quercia. Nweta site na http://www.anticaquercia.com na 10 June 2018.
Cerchio Druidico Italiano. 2012. Cerchio Druidico Italiano weebụsaịtị. Nweta site na http://www.cerchiodruidico.it na 10 June 2018.
D'Ambrosio, Ossian. 2013. La via delle chọrọ. Okwu mmeghe nke moderno, Abụ Ọma 2.
Harvey, Graham. 2016. "Okpukpe ndị ọgọ mmụọ." Pp. 345-67 na Okpukpe dị na ụwa nke oge a, nke Linda Woodhead, Christopher Partridge na Hiroko Kawanami dere, London: Routledge.
Harvey, Graham. 1997. Na-ege ndị mmadụ ntị, na-ekwu okwu banyere ụwa, okpukpe nke oge a, New York: Mahadum New York University Press.
Hutton, Ronald. 2008. Ememme Okpukpe nke Oge A: Ọmụmụ ihe na ọdịdị ọdịnala, akụkọ ọdịnala 119: 251-73.
Wallis, Roy. 1977. Zọ nke Nnwere Onwe. Nyocha nke mmekọrịta ọha na eze nke Scientology, New York: Universitylọ Akwụkwọ University nke Columbia.
Unione delle Comunità Neopagane na ebe nrụọrụ weebụ. nd Nweta site na http://www.neopaganesimo.it/ na 20 March 2019.
Harvey, Graham. 2011. Okpukpe nke oge a: Okpukpe nke fromwa site na Druids na Witches ruo Heathens na Ecofeminists, Nke Abụọ. New York: Mahadum New York University.